Igumbi elitofotofo 1 kwindlu yeendwendwe - I-Airbnb
Igumbi elitofotofo 1 kwindlu yeendwendwe
Igumbi lakho lokulala e iflethi sinombuki zindwendwe onguRoos En Paul
URoos En Paul yi-Superhost
Rhoqo kusasa uvuka uye kwisidlo sakusasa esibandakanyiweyo kunye nokuhlala kwakho kwaye wonwabele iti entsha evela egadini yethu kwindawo entle yophahla. Zive ukhululekile ukuhlala kunye nezinja zethu ezintathu ezolile nezinobuhlobo kwigumbi eliqaqambileyo, lokutyela, kunye ne-terrace ejikelezayo / igadi enesofa, iindawo ezigqunyiweyo, kunye nokufudumeza ngezo ntsuku zibandayo. Uya kuba nokufikelela ekhitshini ukulungiselela ukutya okulula, iti, kunye nekofu ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho.
Sijonge phambili ekubeni yinxalenye yeholide yakho elandelayo okanye uhambo lweshishini!
Igumbi linebhedi enye yabantu ababini ibe liza ne-AC, amanzi, iimagazini, iitawuli, iigawuni nefestile enkulu enokukhanya kwemvelo. Indawo etofotofo izilungele iindwendwe ezimbini; kodwa ke, nceda ujonge elinye igumbi leendwendwe ngoAirbnb ukuba uhamba neqela. Ukuba ayifumaneki, nceda usithumelele umyalezo ngokuthe ngqo. Igumbi lihleli ecaleni kwendlu yangasese elungiselelwe iindwendwe kumgangatho ongasentla wepaseji. Uza kukwazi nokufikelela kwigumbi lokuhlambela elipheleleyo kwindawo esetyenziswa ngumntu wonke esandul 'ukuphuculwa ngeshawa emibini nebhafu eyohlukileyo.
4.98 · Izimvo eziyi-143
indawo ethe cwaka embindini weZaandam.
Umbuki zindwendwe ngu- Roos En Paul
Sikulungele ukukunika inkcazelo. Ngokuhlwa sidla ngokuba sekhaya.
Inombolo yomthetho: 0479 89AE A795 FB12 7CCF